အကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးဖိအားအနားကွပ်ဂိတ်အဆို့ရှင်ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ။ | Kaibo
Kaibo Valve Group Co. , Ltd. လက်စွဲစာအုပ်မှထုတ်လုပ်သော Z541W ဖိအားမြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဂိတ်အဆို့ရှင်၊ တင်းပါးဂဟေဆက်ခြင်းဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစား၊ တစ်ခုတည်းလီဗာအတင့်တင်းသည့် single-disc၊ ထိုင်ခုံတံဆိပ်ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်ပစ္စည်းသည်ကာဘိုက်ဘိလပ်မြေဖြစ်ပြီးအမည်ခံဖိအား PN250 ~ PN320, အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည် ပစ္စည်းကာဗွန်သံမဏိမြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောဖိအားပါဝါဘူတာရုံတံခါးဝအဆို့ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
အပူဓာတ်အားပေးစက်အဆို့ရှင်ဟုလည်းလူသိများသောအပူချိန်မြင့်သောအဆို့ရှင်ကိုအပူဓာတ်အားပေးစက်ရုံအမျိုးမျိုးရှိပိုက်လိုင်းများတွင်အဓိကအားဖြင့်ပိုက်လိုင်းအလွှာကိုဖြတ်တောက်ရန်သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်။ သက်ဆိုင်သည့်အလတ်စား - ရေနှင့်ရေနွေးငွေ့ကဲ့သို့သော non-corrosive medium ဖြစ်သည်။ အခြားအဆို့ရှင်ထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက power station အဆို့ရှင်များသည်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်မြင့်မားသောဖိအားများနှင့်တစ်မူထူးခြားသောမိမိကိုယ်ကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းပုံစံတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ဖိအားများလေလေစိတ်ချရသောတံဆိပ်ခတ်လေလေဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအရည်အသွေးများကြောင့်အထူးအလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေများကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းကိုအခြားထုတ်ကုန်များဖြင့်အစားထိုး။ မရနိုင်ပါ။
1. ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်သည့်အခါ 1. အဘယ်သူမျှမပွတ်တိုက်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်ရိုးရာအဆို့ရှင်သည်တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်များအကြားပွတ်တိုက်မှုကြောင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းမျက်နှာပြင်ကိုသက်ရောက်သောပြproblemနာကိုအပြည့်အ ၀ ဖြေရှင်းပေးသည်။
2. ထိပ်တန်းတပ်ဆင်ထားဖွဲ့စည်းပုံ။ ပိုက်လိုင်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောအဆို့ရှင်ကိုတိုက်ရိုက်စစ်ဆေး။ အွန်လိုင်းကိုပြင်နိုင်ပြီးစက်၏ရပ်တန့်မှုကိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်ပြီးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
3. လူပျိုထိုင်ခုံအဆို့ရှင်ဒီဇိုင်း။ အဆို့ရှင်အခေါင်းပေါက်ရှိအလတ်စားအားပုံမှန်မဟုတ်သောဖိအားတိုးမြှင့်မှုကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုလုံခြုံမှုကိုသက်ရောက်စေသောပြproblemနာကိုဖယ်ရှားခြင်း။
4. နိမ့် torque ဒီဇိုင်း။ အထူးတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းပါသောအဆို့ရှင်ပင်ကိုအလွယ်တကူဖွင့်နိုင်ပြီးလက်ကိုင်အသေးလေးဖြင့်သာပိတ်နိုင်သည်။
5. သပ်တံဆိပျကိုဖွဲ့စည်းပုံ။ အဆို့ရှင်ကိုအဆို့ရှင်ကပေးတဲ့စက်မှုစွမ်းအားဖြင့်တံဆိပ်ခတ်ထားပြီး၊ အဆို့ရှင်ဆန့်ကျင်သပ်ကိုဖိပြီးဒါကြောင့်ပိုက်လိုင်းဖိအားကွာခြားချက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်အဆို့ရှင်ရဲ့ဖိအားကိုမထိခိုက်စေနိုင်ပြီးအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများမှာတံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအာမခံထားပါတယ်။
6. တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်၏ Self- သန့်ရှင်းရေးဖွဲ့စည်းပုံ။ အဆို့ရှင်သည်အဆို့ရှင်နှင့်အဝေးသို့တွန်းလိုက်သောအခါပိုက်လိုင်းရှိအရည်သည် ၃၆၀ ဒီဂရီဖြတ်သွားသည်။ တံခါး၏တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်တွင်အရှိန်မြင့်အမြန်အရည်ဖြင့်အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံ၏ဒေသတိုက်စားမှုကိုဖယ်ရှားရုံသာမကအလျင်အမြန်စီးဆင်းသွားသည်။ Self- သန့်ရှင်းရေး၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စုဆောင်းခြင်းကွာ။
ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း မျက်နှာချင်းဆိုင် အနားကွပ်အရွယ်အစား ဖိအားအပူချိန် Lating spection နှင့်စမ်းသပ်ခြင်း
GB122234 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB ကို / T13927 JB / T9092
ခန္ဓာကိုယ်အဖုံး Disc ပင်မ မျက်နှာဖုံး တံဆိပ်ခတ် Shim ထုပ်ပိုး အလုပ်လုပ်အပူချိန် သင့်တော်သောအလယ်အလတ်
နိုင်လွန် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Graphite
1Cr13 / ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖိုက်
PTFE 25425 ရေ
ZGCr5Mo ≤200 နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti အက်စစ်အက်စစ်
အမည်ခံဖိအား ၁.၆ ၂.၅ ၄.၀ ၆.၄ ၁၀.၀ ၁၆.၀
Shell စမ်းသပ်မှု ၂.၄ ၃.၈ ၆.၀ ၉.၆ ၁၅.၀ ၂၄.၀
ရေအထိမ်းအမှတ်စမ်းသပ်မှု ၁.၈ ၂.၈ ၄.၄ ၇.၀ ၁၁.၀ ၁၈.၀
Backseat စမ်းသပ်မှု ၁.၈ ၂.၈ ၄.၄ ၇.၀ ၁၁.၀ ၁၈.၀
1.6MPa အရွယ်အစား DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L မီလီမီတာ 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
H မီလီမီတာ 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780 2050 2181 2599
W မီလီမီတာ 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600 720 720 720
2.5MPa အရွယ်အစား DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
4.0MPa အရွယ်အစား DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L မီလီမီတာ 130 150 160 180 200 250 280 310 350 400 450 550 650 750 850 950
H မီလီမီတာ 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780
W မီလီမီတာ 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600
6.4MPa အရွယ်အစား DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L မီလီမီတာ 170 190 210 230 240 250 280 320 350 400 450 550 650 750 850 950
H မီလီမီတာ 175 180 210 230 350 359 373 435 500 614 674 818 970 1145 1280 1450
W မီလီမီတာ 120 120 140 160 200 240 280 320 360 400 400 450 560 640 800 800
10.0MPa အရွယ်အစား DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
L မီလီမီတာ 170 190 210 230 240 250 280 310 350 400 450 550 650
H မီလီမီတာ 175 180 210 230 350 359 373 435 500 614 674 818 970
W မီလီမီတာ 120 120 160 180 240 280 320 360 400 450 560 640 720
16.0MPa အရွယ်အစား DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L မီလီမီတာ 170 190 210 230 240 300 340 390 450 525 600 750
H မီလီမီတာ 175 180 210 230 350 359 373 435 500 614 674 818
W မီလီမီတာ 120 120 140 160 200 240 280 320 360 400 400 450
နောက်တစ်ခု: API Bevel Gear Globe Valve